नेतृत्वपंक्तिलाई उत्तरदायी बनाउन टेलिफोन तथा एसएमएसमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको सांसद तथा डा. केसी समर्थक विराज भट्ट श्रेष्ठले बताए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पहिलोपटक टेलिफोन गर्दा व्यस्त भएको जानकारी दिएका थिए । दोस्रोपटक प्रयास गर्दा स्वकीय सचिवले उठाएर ‘रङ नम्बर’ भनेका थिए ।
तेस्रो पटकदेखि ‘कल डाइभर्ट’ भएको डा. केसी समर्थक प्रितम सुवेदीले बताए । ‘हामीले सचिवालयबाट टेलिफोन नम्बर लिएका थियौं, फोन नउठाउने अनेक बहाना भए,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीसँग फोन सम्पर्क नभएपछि उनीहरुले ‘हामीले कहिलेसम्म अनशन बस्नुपर्ने हो ?’ भनेर एसएमएस गरेका थिए । त्यसको उत्तर भने अझै नआएको उनीहरुको भनाइ रहेको छ ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि टेलिफोन र एसएमएसको जवाफ दिएका छैनन् ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई फोन गरी प्रधानमन्त्रीलाई गरेकै प्रश्न सोधेका थिए । पोखरेलले ‘जहाँ जसका लागि बस्नुभएको छ, उसैलाई सोध्नुहोस्,’ भन्ने जवाफ दिएर बीचैमा फोन काटेको सुवेदीले बताए ।
‘सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्स’ को आयोजनामा आइतबार बिहान १० बजेबाट सुरु सत्याग्रहमा प्रा.डा. केदारभक्त माथेमा, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, कृष्ण पहाडीलगायत ७० बढी नागरिक समाजका अगुवाहरुको सहभागिता छ ।
सत्याग्रहमा ऐक्यबद्धता जनाउन कांग्रेस र विवेकशील साझा पार्टीका नेताहरु पनि पुगेका छन् ।
पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत थाप्रेमा आइतबार दिउँसो सावा दुई बजे ना ६ ख ५१७७ नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिदा मकवानपुर पालुङ घर भएका लक्ष्मण थापाका छोरा सुदिप थापाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो ।
खानी खोला प्रहरीका अनुसार काठमाडौं जाने र काठमाडौंबाट मुग्लिन आउने सवारी साधनहरु रोकिएका छन् । सडक सूचारु हुन अझै समय लाग्ने खानीखोला प्रहरीले जनाएको छ ।